Cuntooyinka gargaarka COVID-19 ee ay heli karaan 50-kaas+ - Cunnada ku socda Lugaha
COVID-19 cunnooyinka gargaarka ee ay heli karaan kuwa 50 + ah
Intii lagu gudajiray Faafida COVID-19, barnaamijyada Twin Cities Meals on Wheels waxaa ka go'an inay cunto siiyaan qof kasta oo u baahan iyadoon loo eegin awooddooda wax bixinta. Wadajir ahaan, waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno inaan sidaas ku sii socono illaa 2021.
Waxaan waxyar ka bedelnay tilmaamaheena u qalmida laga bilaabo Janaayo 1, 2021, ee loogu talagalay dadka qaata cusub ee iska diiwaangelinaya Cuntada Lugaha iyadoo aan wax kharash ah laga qaadin dhibaatada ka dhalatay Cudurka COVID-19 Hadda, shaqsi kasta oo jira 50 ama ka weyn oo wajaha dhibaato xagga helitaanka cuntada wuxuu xaq u leeyahay inuu helo illaa 7 cunnadkii asbuucii iyadoo aan wax kharash ah ku bixin. Kuwii qaadanayay COVID-19 cunnooyinka gargaarka ka hor Jan. 1 waxay wali awoodi doonaan inay helaan cunto bilaash ah.
Tilmaamahan maalgelinta gargaarka ee COVID-19 ayaa socon doona illaa 31-ka Maarso waana la beddeli karaa haddii gargaar dheeri ah oo dawladeed la helo. Barnaamijka gargaarka ee COVID-19 wuxuu siiyaa cunto shakhsiyaadka aan awoodin inay bixiyaan qiimaha buuxa ee cuntada isla markaana aan u qalmin barnaamijyada kale ee dowladda ee ka caawiya qiimaha cuntada guryaha lagu bixiyo. Ma jiraan da 'ama dakhliyada looga baahan yahay inaad iska diiwaangeliso Cuntada Lugaha - barnaamijyadan ayaa si fudud gacan uga geysanaya inay daboolaan qiimaha cuntada ee kuwa aan awoodin inay bixiyaan qiimaha buuxa.
Deyrtii oo dhan, barnaamijyada Twin Cities waxay awoodeen inay siiyaan ilaa 21 cunto usbuucii qofkasta oo 18+ ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan hal mar oo ay ka helaan sharciga Coronavirus Aid, Relief, iyo Security Security (CARES), oo dhacay dhammaadka 2020. Waxaan awoodnaa inaan sii wadno u adeegida COVID-19 cunnooyinka gargaarka iyadoo loo marayo deeqsinimada shakhsiyaadka ku deeqaya iyo taageerada aasaasiga ah ee tilmaamahan cusub.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid ka faa'iideysan karaan Cunnooyinka Lugaha, fadlan halkan iska qor si aad u bilawdo adeega ama aad naga soo wacdid 612-623-3363.
Kheyraadka dheeraadka ah ee gargaarka gaajada
Kuwa la halgamaya cunto yaraanta ayaa wici kara Khadadka Caawinta Cuntada ee Minnesota 1-888-711-1151. Waxaad sidoo kale baran kartaa waxbadan oo kusaabsan dadaallada kale ee gargaarka gaajada inta lagu jiro aafada halkan.